Fakana an-keriny tao Ankilizato Olona 14 no nosamborina
Olona miisa 14, ny roa atidoha mpaniraka no voasambotry ny Zandarimariam-pirenena ny 2 desambra 2017 tamin’ny 5 ora maraina tao Soarano sy Soatany, samy any amin’ny kaominin’ambanivohitr’i Malaimbady, ireo tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny tao Ampandrambe Ankilizato tamin’ny herinandro faran’ny volana novambra lasa teo.
SEKOLY AMBONY ESPIC Misokatra ny fianarana “spécial samedi”, hahazoana ny mari-pahaizana Bacc+2
Sekoly ambony iray miorina etsy 67 ha avaratra andrefana ny ESPIC ( Ecole Superieur Professionnelle en Informatique et Commerce).
Fitsaram-bahoaka tany Tsaratanana 100 lahy nanafika tobin’ny zandary
Tovovavy iray 18 taona antsoina hoe Soanarivo monina ao Ambodivala, fokontany Manakana, kaominina Tsaratanàna no nisy namono ny alahady 19 novambra lasa teo.
Jiolahy mpamono ben’ny tanàna Lavon’ny zandary tao Analavory
Jiolahy miisa 5 mpanao fanafihana mitam-piadiana no tra-tehaky ny zandarimariam-pirenena avy ao Analavory ny 12, 13 ary 15 novambra lasa teo, ka ny 4 azo sambo-belona fa ny iray kosa maty.
Nalaina an-keriny kosa ny zandriny vao 6 taona monja, saingy hita teny Ambohidratrimo rehefa hariva ny andro. Nisy kitapo kely nampitondraina azy, ka rehefa nosavaina dia mbola zava-doza ihany no niseho satria hita tao ny voamason’ilay zokiny. Tsy iza ilay zazavavy vao 15 taona voasambatra fa ny mpanampy tao an-trano ihany saingy efa noroahiana. Izy no niantefan’ny ahiahy, ary rehefa nandeha tokoa ny fikarohana dia tra-tehaka, ary voamarina fa tsy afa-miala izy. Teo amin’ny faritra tsy lavitra an’Ambohitrarahaba no nahitana ireto olona roa tsy ampy taona nahavanon-doza tsy mampino ireto niaraka tamin’ny ampahany tamin’ireo zavatra nangalarina tao an-trano. Teo imason'ny ray aman-dreniny no nahatrarana azy ireo. Porofo tsy azon’izy ireo nialana ny fahatrarana volabe 12 800 000Ar sy 24 000 Dolara sy finday. Rehefa nanontaniana ny ray aman-drenin’ireo zaza lasibatra dia nanamarina fa ireo vola izay very tao an-trano ireo tratra ireo, ka ny ampahany betsaka tamin’ilay 14 tapitrisa ariary no efa tratra. Ny fomba nahitana azy roa kosa dia tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao naparitaka tamin’ny tobim-paritry ny zandarimaria sy ny tompon’andraikitry ny fokontany, ka nahafahana nahita ireo olona ireo sy ny ampahan’ny zavatra very, hoy ny fanazavan’ny kolonely Ravoavy Zafisambatra Lehiben’ny CIRGN Analamanga teny amin’ny Tobin’ny zandarimaria Ankadilalana omaly. Nampiasaina mihitsy ny olona manana ny traikefa avy amin’ny sampana misahana ny heloka bevava sy ny alika mpitsongo dia tamin’ny fikarohana ireo ahiahiana. Kely dia efa nahavanon-doza ireo zaza 15 sy 13 taona ireo, ary mba natahotra ny ho tratra ihany izy ireo fa hoe raha maty ilay zaza dia hitan'ny zandary ao anaty masony ny sarin'izay namono azy, ka dia nesoriny ny mason'ilay zaza novonoiny. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana amin’ny mety ho mbola fisian’ny olon-kafa naniraka azy ireo.